Qiimaynta Rubuca 1,aad Ee Degmooyinka Gobolka Jarar Oo Bilaabatay - Cakaara News
Qiimaynta Rubuca 1,aad Ee Degmooyinka Gobolka Jarar Oo Bilaabatay
Dhagaxbuur(CN) Jamce, 2dii October 2015, Shir lagu qiimaynayay waxqabadka rubuca 1,aad ee sanadka 2008TI ee degmooyinka gobolka jarar ayaa saaka kabilaabmay hoolka shirarka ee maamulka magaalada dhagaxbuur.
Qiimaytan oo dul ahaan diirada lagu saarayo hirgalinta horumarka iyo maamulka suuban ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamullka gobolka jarar oo uu ugu horeeyo gudoomiyaha gobolku, gudiga fulinta, xafiisyada horumarinta,maaliyada iyo dakhliga ee dhamaan degmooyinka gobolka.
Furitaankii qiimayntan ayuu gudoomiyaha gobolka jarar mudane Cabdi Cali Mataan si fiican ugu qeexay maamulada degmooyinka qodobada qiimayntan xooga lasaarayo oo ah kuwii heer deegaan lagasoo dhaadhiciyey iyo kuwii degmada uqorshaysnaa labadaba sida: abaabulka dhanka waxbarashada, biyo-xidheenada, hirgalinta tabaca beeraha, abaabulka iyo wacyigalinta bulshada, dakhliga, nidaamka cadcadaanta iyo islaxisaabtanka miisaaniyada, nidaamka gudi kushaqaynta, shirarka timir kumiteega iyo kuwa kabineega. isagoo gudoomiyuhu tilmaamay inay degmooyinku kusaleeyaan warbixintooda qodobadan sare kucad si ay wakhtiga uga faaiidaystaan.
Hadaba qiimayntan oo sii socon doonta mudo afar cisho ah ayaa laga filayaa degmooyinka inay kusoo bandhigaan waxqabad lataaban karo.